Soo dejisan FireAlpaca 2.4.4 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaFireAlpaca
Bogga rasmiga ah: FireAlpaca
FireAlpaca – tifaftirir muuqaal ah oo fudud oo loo isticmaalo waxyaabha xakamaynta ee rinjiga iyo sawirka. Barnaamijkani wuxuu ku fiican yahay kuwa bilowga ah iyo farshaxanno qibrad u leh waxayna bixiyaan qalab farshaxan oo kala duwan oo lagu daro sifooyinka sare. FireAlpaca waxay ka kooban tahay buro iyo qalabka caadiga ah sida qalqalaha, qalin qori, qalab weyn, qalin, jajaban, buuxsan, iwm. Software wuxuu la shaqeeyaa lakabyo la isku duubi karo, iyo qalab muuqaal oo kala duwan sheyada 3D. FireAlpaca waxay leedahay qaababka gaarka ah iyo qaababka dhejiska ah ee loogu talagalay inay abuuraan joornaalada. Sidoo kale, FireAlpaca waxay taageertaa isdhexgalka tabaha shakhsi ahaaneed ee kuu ogolaanaya inaad la shaqeysid sawirro badan iyo mashruucyo isla mar.
Qalabka farshaxanka leh sifooyinka sare
Noocyada burushyada leh saameyn kala duwan
Muuqaal 3D ah
Soo dejisan FireAlpaca
Faallo ku saabsan FireAlpaca
FireAlpaca Xirfadaha la xiriira